SAWIRRO:Duqa Muqdisho oo deeq gaarsiiyay qoysas ay carruur ka dhinteen | Star FM
Home Wararka Soomaaliya SAWIRRO:Duqa Muqdisho oo deeq gaarsiiyay qoysas ay carruur ka dhinteen
SAWIRRO:Duqa Muqdisho oo deeq gaarsiiyay qoysas ay carruur ka dhinteen
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud (Cumar Filish) ayaa xalay Booqday saddex qoys oo shalay Carruur ay ugu geeriyootay Roobabkii ka da’ay Muqdisho.
Guddoomiye Cumar Filish oo marka hore kulan la qaatay qoysaska ayaa waxaa uu uga tacsiyeeyay geerida Carruurtooda oo ku naf-waayay daadadkii ka dhashay roobabkii da’ay oo Carruurta ay guriga biyo farabadan ugu galeen.
Waxaa uu qoysaska ku wareejiyay Deeq lacag ah, wuxuuna Carruurtii ka geeriyootay Alle uga baryay inuu u naxariisto, Samir iyo iimana ka siiyo guud ahaan qoysaska.
Sidoo kale Cumar Filish ayaa Kormeeray qaar ka mid Waddooyinka Magaalada oo ay waaxda Howlaha Guud ee dowladda Hoose Xamar ka wadaan Biyo dhaamin, maadaama saacadihii lasoo dhaafay Muqdisho ay ka da’een roobab aad u xoogan.
Booqashada uu qoysaska ugu tegay Guddoomiyaha Gobolka iyo kormeerka uu sameeyay ayaa waxaa ku Wehlinaayay Guddoomiye ku-xigeenka Howlaha Guud iyo Xoghayaha Guud ee Maamulka Gobolka Banaadir.
Ugu yaraan 7 Carruur ayaa ku geeriyootay daadadkii ka dhashay roobab xoogan oo saacadihii lasoo dhaafay ka da’ayay Muqdisho, waxaana daadadka ay Carruurta ugu galeen Gurigii ay ku sugnaayeen oo ku yaalla xaafadda Buula-xuubey ee degmada Wadajir.
Previous article3 qof oo xalay ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay Nairobi
Next articleWasaaradda tacliinta oo soo saartay lacagaha dugsiyada sare ee dib ufurka iskuullada